Fanamboarana Basy vita gasy Anisan’ny akora ampiasaina ny dabilion’ny mpianatra
Nanao tatitra mahakasika ny vokatry ny asa fampandriam-pahalemana natao tao anatin'ny Faritra Matsiatra Ambony ny eo anivon'ny OMC izay iarahan'ny Governoram-paritra, ny Prefen'i Fianarantsoa,
ny Jeneraly kaomandin'ny faritany miaramila faharoa. Nisy vokany ny toromarika napetraka nandritra ny fitetezam-paritra nataon'ny OMC Matsiatra Ambony, hoy ny fanazavana. Tao anatin'ny 10 andro dia Basy poleta sy basy lava vita gasy maro no naverin'ireo olona mitana izany. Misy ihany koa ireo basy mahery vaika tsy manara-dalàna efa azon'ny mpitandro filaminana. Miroso hatrany ny atao hoe « Action Civilo-militaire » iarahan'ny fitondram-panjakana sy ny Tafika ao amin'ny Faritra Matsiatra Ambony satria fandriampahalemana maharitra no hapetraka eto, hoy ny fanamarihana. Mampita hafatra ny Goverinora fa tsy handeferana ny fitazonana basy tsy ara-dalàna, indrindra ny fanamboarana basy izay mampalahelo fa ny dabilio ampiasain'ny mpianatra no simbain'ireo olon-dratsy anamboarana azy, hoy hatrany ny fampitam-baovao.